कुलप्याड मोबाइलको लखपति योजना, हरेक साता १ लाख रुपैयाँ जित्न सकिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रविधि > कुलप्याड मोबाइलको लखपति योजना, हरेक साता १ लाख रुपैयाँ जित्न सकिने
काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्राण्ड कुलप्याडले उपभोक्ताको लखपति योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको लागि कुलप्याड मोबाइलको आधिकारीक आयातकर्ता तथा बितरक कम्पनी एसडी इन्टरनेशनल कुलप्याड लखपति योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
कुलप्याड मोबाइलको ब्राण्ड एम्बेस्डर शिल्पा मास्केले हरेक साता एकजना ग्राहकहरुलाई १ लाख रुपैयाँ उपहारमा प्रदान गर्ने लखपति योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । कुलप्याण्ड लखपति योजनामा कम्पनीले कुलप्याण्डका स्मार्टफोनहरु किन्ने ग्राहकहरुमध्येबाट प्रत्येक साता एक जना भाग्यशाली ग्राहकलाई १ लाख रुपैयाँ उपहार प्रदान गर्नेछ ।
प्रत्येक साता कम्पनीले ५ जना बिजेताहरुलाई कुलप्याड स्मार्टफोन समेत उपहार प्रदान गर्नेछ । यसका साथमा कम्पनीले प्रत्येक साता १० वटा कुलप्याडको इयरबड समेत प्रदान गर्नेछ । बैशाख मसान्तसम्म आयोजना गर्ने कुलप्याड लखपति योजनाअन्तरगत ८ सातामा ८ जना प्रत्येक ग्राहकहरुलाई १ लाख रुपैयाँ, ४० वटा स्मार्टफोनहरु र ८० वटा कुलप्याड इयरबड प्रदान गर्नेछ ।
योजनामा सहभागी हुन कुलप्याडका कुनैपनि स्मार्टफोन खरिद गरेर त्यसको आईएमईआई नम्बर ३३००१ मा एसएमएस गरी पठाउनुपर्नेछ । यसको लागि कुलप्याड लेखेर स्पेस दिई आईएमईआई नम्बर लेखेर स्पेस दिई ग्राहकको नामसहित ३३००१ मा पठाउनुपर्नेछ ।
यस योजनामा प्रत्येक साता सहभागीहरुलाई गोलाप्रथाद्धारा छनौट गरि कुलप्याडको आधिकारीक फेसबुक पेजबाट घोषणा गरिनेछ । लखपति योजनाले कुलप्याडको ग्राहकहरुलाई नयाँ वर्षमा नयाँ उपहार दिने कम्पनीका जनरल म्यानेरज कर्पोरेट हेड उपेन्द्र शाहले बताउनु भयो ।
२०७७ चैत्र १५ गते १५:५६ मा प्रकाशित
२७ वर्षपछि काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी ! आज कहाँ-कहाँ झर्यो ?
२१.२५ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजनपछि कुमारी बैंकले बोलायो साधारणसभा
देउवा र प्रचण्डलाई नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीको पत्र,‘अनर्थको अध्याय अन्त्य गरियोस्’
लोकसेवा शाखा अधिकृत परीक्षाः २१ हजारमा ४ हजार मात्र उत्तीर्ण
सबै विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न/नगराउन भन्दै यस्तो आयो सूचना !